ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမြို့မှာကျင်းပမယ့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ ညီလာခံဟာ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးနေတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့NCCT နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ သီးသန့်စီစဉ်တဲ့ညီလာခံဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးကို ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ပန်ဆန်းမြို့မှာကျင်းပမယ့် ညီလာခံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA က မေးမြန်းရာမှာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က အဲဒီညီလာခံ ဟာ သီးသန့်ဖြစ်ကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ သဘောတူညီနိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NCCT ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ထိပ်သီးညီလာခံ ကိုတော့ သီးခြားကျင်းပသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ့ညီလာခံကိုလည်း ဘယ်မှာကျင်းပမယ်ဆိုတာနဲ့ ရက်အတိအကျလည်း မသတ်မှတ်ရသေးတာကြောင့် လာမယ့် မေလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း မသေချာသေးဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
လာမယ့် မေလ ၁ ရက်နေ့ ၀ ဒေသ ပန်ဆန်းမှာကျင်းပမယ့် ညီလာခံကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားပြီး အဲဒီဖိတ်ကြားထားတဲ့ အဖွဲ့တွေထဲက ကိုးကန့်၊ ရခိုင်နဲ့ TNLA တအာင်းပလောင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်တို့ကို မဖိတ်ကြားဖို့ အစိုးရက တားမြစ်ထားပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ကို RFA သတင်းထောက် ကိုသီဟထွန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကေအိုင်အေက တကယ်ရောငြိမ်းချမ်းရေးလိုခြင်လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဓိကပါ ဖစ်စဉ်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင်ကေအိုင်အေသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးခေါင်းစဉ်များဖြင့် ရခိုင်အားမြှောက်ပေးလိုက် တအောင်းအားမြှောက်ပေးလိုက် ကိုးကန့်အားပူးပေါင်းမြှောက်ပေးလိုက်နှင့် ယခုနောက်ဆုံး အစိုးရနှင့် အဆင်ပြေနေသည့် ဝနှင့်မိုင်းလားအဖွဲ့အားခွဲထုတ်ပြီး မြှောက်ပေးရန်ပြုလုပ်နေ ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
ကေအိုင်အေရိုးသာဖို့လိုပြီ...မရိုးမသားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုခြင်သည့်အခြား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား လူမျိုးရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မဖျက်ဆီးသင့် မလုပ်သင့်တော့ပါ.. ဝနှင့် အခြားအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်းကေအိုင်အေ ကြိုးဆွဲရာ လိုက်မကရန်လိုအပ်ပါသည်။ငြိမ်းချမ်းပါစေမြန်မာပြည်
သေချာတာတခုကတော့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ငယ်တွေကိုမြှောက်းပေးပီး အခြားတဖက်တဖက်ကလည်း ၀ မိုင်းလားကဲ့သို့အစိုးရနဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်း အစိုးရဲနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်အောင်ရန်တိုက်ပေးနေတာပဲ
If seeking for true peace, everyone should get involved in conference. The Government should stay aside without interfering them. The spirit of trying to control others always leads to division.
ဗိုလ် ချုပ် ဂွမ်းမော် ကို မေးမြန်း ထားတာ နားဆင် နိုင် တယ် ဆိုလို့လိုက် ရှာတာ
မ တွေ့ ပါ ဘူ လူကြီးမင်း ခဗျာ ဘယ်နား မာ နားဆင် ရပါ မလဲ တစ် ချက် ပြော ပေးပါ
- ဓါတ်ပုံရဲ့အထက် ညာဘက်က နားကြပ်ပုံ ကို ကလစ်လုပ်ပါ။ [ အယ်ဒီတာ]
Apr 21, 2015 07:16 PM
ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ထားပြီး ဆွေးနွေးကြတာ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အားလုံးပါဝင်တာကောင်းတာပေါ့။ ဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့် ၇လာဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်တာပဲ။ ဟိုလူမပါရဘူး ဒီလူမပါရဘူး ဆိုတာ ကျဉ်းမြောင်းတာပေါ့။
Apr 20, 2015 07:44 PM